Umakhi wekhadi | Kusuka kuLinux
jsbsan | | Aplicaciones, Umklamo
Sanibonani bangani, ngelinye ilanga ngibone okuthunyelwe okunikezelwe izinsiza zokufunda ukuthi usebenza kanjani ne-Inskcape de izinga futhi ngakhumbula ithuluzi engalakha kanye no-Antonio Sánchez lokwenza amakhadi azowasabalalisa Picaros Picaros «Diego», nokuthi ingasetshenziswa kokunye ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux (inqobo nje uma uneGambas3.4.2 noma inguqulo ephakeme efakiwe).
Lolu hlelo lususelwa ekusebenziseni izifanekiso ezenziwe nge- I-Inskcape lapho kunezelwe khona uchungechunge lwezinkambu zombhalo ezizogcwaliswa ngokuzenzekelayo ngohlelo lokukhiqiza amakhadi (hhayi elilodwa kuphela, kodwa lonke uhlu olunika lona, ​​konke ngokuzenzekelayo).
Imininingwane ifakwe ngqo kwifomu noma ungayinamathisela kusuka komunye umthombo (isibonelo ispredishithi).
Izithombe zamakhadi zingathathwa kwikhamera yewebhu noma zidluliselwe kuwe ngendlela efanayo yokuqoqwa kwedatha ngefomethi ye-.png noma ye-.jpg
Njengoba izifanekiso zenziwa ngefomethi ye-.SVG, zingaguqulwa yi-Inskcape, futhi zivumelane nanoma yisiphi isidingo.
Ungafinyelela futhi kugalari yezifanekiso ezikwifolda yedrayivu yeGoogle, lapho uzothola khona izifanekiso ezintsha nezifanekiso "ezingenalutho" ukudala amakhadi akho enziwe ngezifiso.
Izifanekiso ezisetshenziswayo ezesikole (umtapo wolwazi, ezemidlalo, igumbi lokudlela, njll).
Uhlelo ekugcineni lukhiqiza amakhadi ngefomethi ye-.pdf nakumashidi osayizi we-A4 anamakhadi ayi-8 lilinye.
Ngenze ibhulogi encane http://generadorcarnets.blogspot.com.es/ lapho ngilayishe khona okokufundisa kwamavidiyo, izithombe-skrini nesithangami esincane sabasebenzisi ukuthi baphawule ngezimbungulu, ukuthuthuka, njll.
Ikhodi yomthombo yephrojekthi isingathwe ngekhodi le-google: http://code.google.com/p/generadorcarnet/
Uhlelo lunohlelo lokuvuselela ukuthi uma ngifaka inguqulo entsha, itshela umsebenzisi ukuthi yikuphi ukuthuthuka futhi uma efuna ukuya kusayithi lokulanda ukuyifaka kabusha, ukuze uhlale unenguqulo yakamuva !!!
Ngiphinde ngenza ezinye izinhlelo ezimbili ezifanayo: IDiploma Builder y Umenzi wemingcele, kodwa ngizokhuluma nawe ngalezo ezinye usuku 😉 ...
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Umakhi wekhadi
Ngicabanga ukuthi enkampanini yokuphrinta kungcono ukuthi amakhadi anamathelwe bese umugqa owodwa ubekwa phezulu omunye phansi. Ngakho ukusika kulula futhi nephepha lisetshenziswa kahle.
Ngiyakuqonda ukuthi ukunamathela kakhulu kubo, kepha leyo abanye abanye phezulu nabanye angiwuboni umqondo. Ungaligcina kanjani iphepha elifana naleli uma lisengunxande?
Njengoba iphrinta ingichazile (?) Amakhadi / amakhadi ngokuvamile ahlukile phezulu nangaphansi (ngokwesibonelo, phezulu eluhlaza okwesibhakabhaka nangaphansi okumhlophe). Ngakho-ke uma bonke beya ohlangothini olufanayo, ukusika okungacacile kungashiya umugqa womunye umbala. Ukungasho ukuthi uyinki ungasebenza futhi njll. Okuluhlaza okwesibhakabhaka nohlaza okwesibhakabhaka, okumhlophe nokumhlophe
Umbono omuhle kakhulu, siyakuhalalisela!
Sawubona, kade ngifuna into efanayo. Ngabe kuzokwazi ukwesekwa ifomethi ye-CR-80, esetshenziselwa imininingwane futhi ukwazi ukuphrinta ngqo kuphrinta ye-Evolis? Njengamanje izixazululo engizitholile (ukuphrinta iziqinisekiso ezivela kuma-CV futhi ngaso leso sikhathi (ngemigqa emide yokulinda emicimbini) kungokuthengisa, okwandisa izindleko futhi okudala izinkinga zokuziphatha. Ngiyabonga ngentuthuko!
Angazi leyo fomethi (CR-80), kuzofanele ungazise ngemininingwane yayo.
Anginayo nephrinta ye-Evolis, ngakho-ke ngingahlola engikwenzayo. unayo? Ingabe isebenza nge-linux? Uma kunjalo, singaxhumana nokwenza izivivinyo bese sengeza le nketho ohlelweni.
Ekubuyekezweni okungu-r35, ukuxhaswa kwe-CR-80 sekuvele kufakiwe, udinga nje ukwenza izivivinyo ezithile ukuqinisekisa ukuthi iphrinta kahle.
Umbono muhle. Ake sibheke ukuthi ngingaluthumela yini lolu hlelo lweWindows (ngeVisual Studio ukuze ingakhi izinkinga eziningi kangaka ngeGambas).
"Ukuze ingakhiqizi izinkinga eziningi kangaka ngezimfanzi"
Ngivele ngichazile ukuthi ungazisebenzisa kanjani izinhlelo ze-gambas ku-Windows kokunye okuthunyelwe ( https://blog.desdelinux.net/gnulinux-y-gambas3-ejecutandose-en-windows/ ), ngaphandle kokubanjwa ngekhamera yewebhu, konke okunye kuzosebenza ngaphandle kokushintsha noma yimuphi umugqa wohlelo !!!
UDkt Leon kusho
IPanita ngokushesha nje lapho ngikwazi ngizokusiza ngalolu hlelo ngoba bengizokwakha olunye olunjalo, kepha njengoba usunayo vele ngifuna ukukusiza ekwakhiweni kwayo nasekusekeleni, ngifuna ukuvunywa kwakho ngaphambili ngoba izingqondo ezimbili zicabanga kangcono kunoyedwa ngakho-ke noma ngubani angayisebenzisa
Phendula uDkt Leon
Ngidale ividiyo entsha lapho ngichaza khona ukuthi ngingawakha kanjani amakhadi amasha noma ngiwenze ngendlela oyifisayo.
u-fabian lopez lazcano kusho
sawubona ngisha ku-linux, angikwazanga ukulayisha uhlelo, ungafundisa
Phendula ku-fabian lopez lazcano
I-SlimeVolley: Umdlalo olula we-volleyball ku-Linux
Ukufakwa kwe-GNOME ku-Arch Linux